Madagasikara Marefo ara-pahasalamana ny ankamaroan’ireo zokiolona
Tokony hiomanana ny fahanteran’ny zokiolona mba ho salama sy mavitrika izy ireo.
Nisy ny atrikasa ho fampahafantarana ireo paikady nasionaly hahatratrarana izany vina izany omaly tetsy Anosy. Ampiririsihana amin’ny alalan’ny fandresen-dahatra ireo tompon’andraikitra mpanapan-kevitra hanaiky sy hihevitra ny zokiolona. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fahalalana sy ny fahaiza-miainan’ny olona hanana fahanterana mavitrika. Ankoatr’izay dia tafiditra anaty paikady ihany koa ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana sahaza ho an’ny zokiolona. Tanjona ny hahasalama ny zokiolona ary mba tsy hailika sy ho vesatra loatra amin’ny fianakaviana sy ny firenena izy ireo. Nandrafitra ireo paikady izao ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana (OMS). Tsiahivina fa sokajiana ho zokiolona ny 60 taona sy ny mihoatra ary manome 4,6%-n’ny mponina eto Madagasikara araka ny tatitry ny Instat. Nilaza ihany koa ny teo anivon’ny OMS fa amin’ny taona 2020 dia tombanana hihoatra ny zaza latsaky ny 5 taona ny isan’izy ireo.